MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA EEYAHA EYGA EE LOO YAQAAN 'ST JOHN'S WATER DOG DOG' - EEYAHA
Bakhtiga eeygii John's Water Dog
cas sanka pitbull jaalle isku qas ah
Eyga Biyaha ee St John wuxuu aad ugu eg yahay casriga casriga ah ee Ingiriisiga Labrador oo waliba aad ugu eg Labrador-ka Mareykanka. Waxay leeyihiin lafo qaro weyn waxaana si xoog leh loogu dhisay laabta muruqyada. Tarankaani waxaa loo yaqaanaa jubbado madow oo leh calaamado cad oo ku yaal laabta, cagaha, garka, iyo sanka (sidoo kale loo yaqaan calaamadaha tuxedo). Eeyahaani waxay jeclaayeen dabaasha waxayna lahaayeen jaakado gaagaaban oo waliba loo maleeyay si ay isaga ilaaliyaan biyaha qabow. Dabohoodu dhererkoodu wuxuu ahaa dhexdhexaad iyo dheere dhererkooduna wuxuu ahaa dhumuc dhogor jilicsan. Sankooda way dheeraayeen waxayna noqdeen kuwa dhuuban xagga sanka. Waxay lahaayeen lugaha khafiifka ah marka loo barbar dhigo foostadooda sida xabadka oo kale waxaana lagu yaqaan inay u muuqdaan kuwo jilicsan mararka qaarkood jirkooda dhaadheer awgood.
Eyga 'St John's Water Dog' wuxuu aad daacad ugu ahaa milkiilaheeda. Waxay ahaayeen saaxiibtinimo, eeyo faraxsan oo diyaar u ah inay qabtaan hawl kasta. Waxay ahaayeen kuwo jecel inay ka farxiyaan, had iyo jeer sugaya amar waxayna raacayaan milkiilayaashooda.
Miisaanka: 35-55 rodol (16-25 kg)
Miisaanka: 55-90 rodol (25-41 kg)
Ma jiraan diiwaanno arrimaha caafimaadka la xiriira.
Eeyadan ayaa loo dhaqmi jiray biyaha waxayna jeclaayeen inay banaanka ku maqnaadaan. Waxay u badan tahay inay u baahdeen meel ballaaran oo ay ku noolaadaan maaddaama ay ahaayeen eeyo waaweyn oo aan si fiican ugu fiicnaan lahayn guri dabaq ah.
Meel bannaan oo lagu dhex wareego oo sahamintu ku habboonaan lahayd, haddii kale markaa socod dheer ayaa kugu filnaan lahaa. Waxay doorbideen inay ku noolaadaan meesha ay ku jiraan biyo ay ku dabaalan karaan
Qiyaastii 4-6 eey
Waxay haysteen jaakado gaagaaban oo qaro weyn oo laga yaabo inay u baahan yihiin oo keliya in la cadayo ama la maydho markii loo baahdo.
Ma jiraan dukumiintiyo hore oo ku saabsan St John’s Water Dog. Waxa kaliya ee aan ognahay ayaa ah in noocani la soo saaray qiyaastii qarnigii 15aad markii sahamiyayaashu wali gumeystaan ​​dhulal cusub. John Cabot, oo ah sahamin Talyaani ah, ayaa helay jasiiradda Newfoundland 1497 halkaasoo lagu xamanayo in St John’s Water Dog markii ugu horreysay laga helay. Muddo aan dheereyn kadib, kalluumeysato ka yimid Spain, England, iyo France ayaa iyagana yimid Newfoundland, oo laga yaabo inay la socdaan eeyo u gaar ah.
eeyaha u eg schnauzers
Sidaad u maleyn karto, Eyga Biyaha ee St John ayaa la sheegay in lagu soo barbaaray Newfoundland iyagoo kaashanaya eeyaha uu kalluumeystuhu jasiiradda keenay. Eeyahaas waxaa laga yaabaa inay ku jiraan kuwa Faransiiska St. Hubert's Hound , Eyda Bortuqiiska , iyo tilmaamaha tilmaamaha ka yimaada Yurub. Waxaa la sheegay in waqtigan oo dhan, eeyo badan laga soo raray doomo ganacsi, taas oo dadka reer Newfoundland siisay astaamo badan oo ay ku awoodaan inay ku beero eeyga ay doonayeen. In kasta oo aragtidan ay tahay tan ugu caansan, haddana ma jirto caddayn toos ah oo muujinaysa in tani ay gebi ahaanba sax tahay.
Warshadaha kalluumeysiga ee xilligaas uma aysan fiicneyn sida ay maanta tahay, taas oo kalluunka waaweyn u horseedda inay inta badan ka soo baxsadaan doonta ka hor inta aysan jillaabku iyaga ka bixin. Dhibaatadani waxay keentay baahida loo qabo biyo-biyood. Si loo soo qabto kalluunkan waawayn, kalluumeysatada ayaa si gaar ah u sameysay suunka eyga oo si tartiib tartiib ah eyga biyaha ugu ridaya, isagoo rajeynaya inuu kalluun soo qabto. Eeyadan ayaa aad u jeclaa biyaha iyo shaqadooda waxaana sidoo kale loo adeegsaday xeebta si ay gacan uga geystaan ​​soo qabashada kalluunka. Iyadoo bini'aadamka uu haysto hal daraf shabaqa weyn, eeyaha shaqadooda waxay ahayd inay dhamaadka kale ee shabaqa dib ugu soo celiyaan xeebta ka dib markii ay ku faafeen badda in muddo ah. Eeygu wuu dabaalan lahaa ilaa dhamaadka shabaqa, xarigana afka ayuu ku qabsan jiray oo wuxuu u dabaalan jiray xeebta halka shabaqa oo dhami ay ka soo horjeedaan kan hada socda, kalluunka hoostiisa laga soo qabto
Eyga 'St John's Water Dog' wuxuu ahaa mid aad u caqli badan, daacad ah, shaqo badan oo u heellan inuu ka farxiyo. Sababtoo ah Eyga Biyaha ee St John ayaa waxtar badnaa, ugu dambayntiina waxaa loo soo dhoofiyay dalal kale oo ay ka mid tahay England halkaas oo loogu adeegsan doono inay ku soo baxaan Labrador dib u habeyn .
Eyga Biyaha ee loo yaqaan 'St John's Water Dog' wuxuu caan ku ahaa laga soo bilaabo 1600 ilaa iyo dabayaaqadii 1700, gaar ahaan kuwii ku noolaa meelaha u dhow kalluumeysiga. Si kastaba ha noqotee, 1780, Badhasaabka Badbaadada ee Newfoundland wuxuu ku dhawaaqay sharci sheegaya in ay jiri karaan oo keliya hal eey qoyskiiba. Sharcigan waxaa loo sameeyay si loo badbaadiyo tirada idaha ee soo dhaca. Fikradda ayaa ahayd in eeyaha yar, ay yaraan doonaan ugaadhsadayaasha ugaarsada idaha. Falkan waxaa loogu yeeray Sharciga Idaha ee Newfoundland. Dhab ahaan, waxaa la sheegay in sharcigan loo abuuray sababo siyaasadeed awgood isbadalka wanaagsan ee soo dhaweynta u dhexeeya kaluumeysatada ka soo socota England iyo beeraleyda idaha ee Newfoundland. Ficilkan awgiis, St John's Water Dog wuxuu bilaabay inuu hoos u dhaco tirada dadka.
Ka dib Sharciga Idaha Newfoundland ee 1780, sharciyo badan oo dheeri ah ayaa la saaray taas oo sii yareysay Eyga Biyaha ee St John ee taranka. Intii lagu gudajiray waqtigan, waxaa sidoo kale jiray canshuur sare oo laga qaaday eeyaha dumarka taas oo inta badan kadhigneyd in eeyaha dhedigga isla goobta lagu dilo maxaa yeelay wax badan oo ay u qalmaan ma jirin. Ficilkii ugu dambeeyay ee taxanahan dheer ee xadidaada ah wuxuu ahaa Xeerka karantiil ee Ingriiska ee 1895. Maadaama Ingriisku uusan lahayn cudurka raabiyada ee dalkooda, waxay ka walwalayeen in cudurku ugu safro dhulkooda ganacsi. Si taas looga hortago, Sharciga karantiil ee Ingiriisku wuxuu hubiyey oo keliya in la aqbalo eeyo shati haysta oo la karantiilo muddo 6 bilood ah ka dib imaatinka England. Sidaad u jeeddo, tani waxay si aad ah u adkeysay in lagu sii noolaado Eyga Biyaha ee St John sidii noole. Maaddaama Eydii Biyaha ee 'St John's' ee horay ugu sugnaa England dhammaantood loo adeegsaday inay bilaabaan abuuritaanka taran cusub, in yar oo ka mid ahina kama harin daahir. Sannado badan kadib, Eyga Biyaha ee St John ayaa la sheegay in laga dhex helay magaalooyin yar yar oo kalluumeysi oo ku dhex yaal Newfoundland.
Waxaa la sheegay in lamaane St John's Water Dogs ay badbaadeen ilaa 1970s markii qoraaga reer Kanada la sheegay inuu isku dayay inuu badbaadiyo taranka. Isagu iskama uusan dayin si adag sidii uu si fudud ugu soo caano maalay St John's Water Dog oo leh Labrador Retriever, wuxuu siiyay laba eeyo halka labada kalena ay u dhinteen sidii eyyo. Si kastaba ha noqotee waxay lahaayeen isla calaamado isku mid ah oo madow iyo cadaan ah sida asalka asalka ah ee St John's Water Dog. Labada ka mid ah ee badbaaday eeyaha St John's Water waxay ahaayeen lab, taas oo ka dhigaysa mid aan macquul u ahayn inay sii wadaan dhalashada. 1980-yadii, labadii eey ee waayeelka ahaa ayaa la sawiray oo loo calaamadeeyay inay yihiin Eey-biyoodkii St John ee ugu dambeeyay taariikhda.
ey ey buur beri ku soo noqotay
midabada amerikankaordorder midab buluug ah
3 bilood jir cunug yar yar
retriever dahab ah oo lagu qasay spaniel cocker